Litmus: Afaka mamaky ny mailakao ve ny olona? | Martech Zone
Nifantoka izahay… er… nikiakiaka momba ny finday taraiky loatra ary antenaiko fa hahazo ny sainao ianao. Raha manao zavatra iray ianao anio, dia tokony hizaha toetra ny mailakao izay andefasanao ny mpivarotra mailakao hahitanao raha tena afaka mamaky azy ireo ny olona.
Rehefa namolavola modely mailaka fototra ho an'ny mailaka ho an'ny vahaolana WordPress, CircuPress, fananganana modely mailaka mamaly izay nanova ny habeny, azo vakiana ary niasa nanerana ny ankamaroan'ny mpanjifan'ny mailaka dia tsy nampatahotra mihitsy. Nanomboka tamin'ny sasany izahay modely mailaka mamaly maimaimpoana avy any Zurb.
Rehefa tonga ny fotoana famolavolana ny CircuPress ho an'ny fangatahana, mailaka isan'andro sy isan-kerinandro dia nilavo lefona izahay ary nanakarama ireo matihanina tao Email moanina hanao izany. Ny mailaka Monks dia manana maodely mailaka tsara tarehy maoderina maherin'ny 100 izay azonao vidiana tsotra izao hiala amin'ny tranokalany raha tsy manana endrika efa novolavolaina ianao.
Miaraka amin'ireo maodelin'ny mailaka anay, ireo moanina mailaka koa dia nanome anay ny Mitatitra i Litmus izay nanome anay pikantsary isaky ny mailaka amina birao sy mpanjifa mailaka mifototra amin'ny tranonkala. Ny tsirairay dia azo kitihina ary zahana koa:
Ny mety dia mandany vola be ianao amin'ny famafana ny mailaka mety tsy ho voavaky amin'ny fitaovana maro. Miaraka amin'ny antsasaky ny olona rehetra manamarina mailaka amin'ny fitaovan'ny findainy - ny fandaharanao latabatra antitra tsy misy fandraisana andraikitra dia mety hatsipy ao anaty fako fotsiny. Manaova fanandramana Litmus mahita!
Tags: Mailaka (Android)famolavolana mailakamailaka Marketingmoanina mailakaEntourage 2004Entourage 2008Gmail (Android)Gmail (Desktop)Gmail (iOS)Gmail (Finday)Hotmail (Desktop) Hotmail (Mobile) ThunderbirdlitmusMail mivantanaMail (iOS)Mail (OSX)Outlook 2003Outlook 2007Outlook 2010Outlook 2011 ho an'ny MacOutlook 2013Outlook Expressmailaka mamalySparrow (Desktop)Sparrow (iOS)Windows MailYahoo Mail (Desktop)Yahoo Mail (finday)
22 Nov 2013 amin'ny 6:21 maraina
Wow!! Mahafinaritra fotsiny ny mankafy tanteraka rehefa nandalo ilay lahatsoratra. Tokony hilaza lahatsoratra matihanina. Mahasoa ho ahy.